Iska ilow Messi iyo CR7, Jose Mourinho oo tilmaamay laacibka ugu wanaagsan kubadda cagta – Gool FM
Iska ilow Messi iyo CR7, Jose Mourinho oo tilmaamay laacibka ugu wanaagsan kubadda cagta
Dajiye April 26, 2020
(Yurub) 26 Abril 2020. Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa ah xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta xilligan, balse waxaa ay doodi ka taagantahay inay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa taariikhda ciyaartan quruxda badan.
Dadka qaar ayaa qaba inay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa kubadda cagta, balse macallinka kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa qaba aragti taas ka duwan, waxaana uu laacibkii ugu wanaagsanaa kubadda cagta uu u arkaa halyeyga Brazil ee Ronaldo Nazario.
Ka hor inta aysan garoomada kubadda cagta la wareegin CR7 iyo Messi oo adeegsanaya xirfad iyo tayo u gaar ah, waxay kubadda cagta marti soortay halyeeyo maqaam sare ka gaaray ciyaartan, waxaana ka mid ah Ronaldo-hii Brazil.
Ku guuleysiga Koobka Adduunka oo labo jeer ah, hanashada labo Ballon d’Or iyo iftiiminta garoomada ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Camp Nou iyo Bernabeu ayaa ah xusuuso uu reebay Ronaldo Nazario.
Balse nasiib daro, waxaa waayihiisii quruxda badnaa soo af-meeray dhaawacyo kala duwan oo isu xig-xigsaday, mana uusan ugu raaxeysan garoonka sida ay Messi iyo Ronaldo nagi ugu ahaadeen.
Si kastaba ha ahaatee, Jose Mourinho ayaa si geesinnimo leh kaga door-biday halyeyga xiddigaha caburka ku xiray difaacyada xilligan ee Messi iyo Cristiano.
“Ronaldo, El Fenomeno. Cristiano Ronaldo iyo Leo Messi waxay heleen muddo-ciyaareed ka badan kan kale, waxay dabaqadda sare ku jireen maalin walba oo ka mid ah 15-sano” ayuu Mourinho u sheegay LiveScore.
“Si kastaba ha ahaatee, haddii aan ka hadalno tayada iyo xirfadda, cidna ma dhaafi karto Ronaldo [Nazario]. Markii uu Barcelona kula sugnaa Bobby Robson, waxaan garawaaqsaday inuu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee aan abid ku arko garoonka.
“Dhaawacyada ayaa dilay xirfaddiisa, ee sidan wuu ka cajaa’ib badnaan lahaa, balse tayadii uu lahaa isagoo 19-jir ah waxay ahayd mid cajiib ah” ayuu Mou ku ammaanay laacibkii hore ee Barcelona, Real Madrid, Inter Milan iyo kooxo badan oo ay AC Milan ku jirto.
Sida ay u muuqan karto shaxda kooxda Chelsea kaddib marka ay ka soo adeegato suuqa xagaaga
Haddii dhaxal sugaha Sucuudigu uu iibsado Kooxda Newcastale, waa kuma xiddiga ka tirsan Barcelona ee ay la soo wareegayaan?